Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah u furay shirka Golaha Amniga Qaranka – XAMAR POST
Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah u furay shirka Golaha Amniga Qaranka
By Mohamed Ahmed On Jul 5, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah Madaxtooyada uga furay shirka Golaha Amniga Qaranka, shirka oo uu Madaxweynuhu shir guddoominayay ayaa socon doona muddo labo maalmood.
Shirkan ayaa lagu lafo gurayaa qodobo ay kamid yihiin dib u habeynta laamaha amniga, wada shaqeynta hay’adaha amniga ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada iyo mideynta qorsheyaasha lagu cirib tirayo kooxaha argagixisada ah.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay keddib furitaanka shirka ayaa sheegay in uu shirkan daba socdo shirkii bartamihii bishii Abriil ee sanadkan lagu qabtay Madaxtooyada Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya. shirkaas ayaa looga dhawaaqay Golaha Amniga Qaranka iyo qorsheyaal kale oo ay kamid ahaayeen dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo xoojinta dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada ah.
Waxaa ka qayb galaya shirkan xubnaha Golaha Amniga Qaranka oo ka kooban Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Ra’iisul Wasaaraha, Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada Dowladda Federaalka, Madaxweynayaasha Dawlad Goboleedyada, iyo Taliyeyaasha Ciidamada qalabka sida.
Shirka ayaa lagu wadaa in la soo gaba gabeeyo maalinta berri, waxaana lagu wadaa in laga soo saaro war murtiyeed ku aadan arrimaha amniga dalka.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa dhawan safaarada Soomaliya ee Talyaaniga ka bilaabeysa adeega bixinta Baasaboorka
Raiisul Wasaare Khayre oo Muqdisho ku Soo laabtay. iyadoo aysan wehlin Maxaabiistii la hadal haayay